Herbal Drink Kalama - Imewe Mmewe
Kalama Ndabere maka echiche ha bu ihe mmetuta obi. Ebumnuche a zụlitere na echiche ndị ahịa mebere ya na ebumnuche ndị ahịa ya, ha na-eje ozi ebumnuche ịkwụsị onye ahụ nso na shelf achọrọ ma mee ka ha bulie ya n'ọtụtụ ụdị ndị ọzọ. Ihe ngwugwu ha na-ekwupụta nsonaazụ nke extracts plan, usoro ihe osise mara mma nke a na-ebipụta na karama pancelain dị ọcha n'ụdị okooko osisi. O ji anya ya mee ka onyinyo nke ngwaahịa eke pụta ìhè.
Aha oru ngo : Herbal Drink, Aha ndị na-emepụta ya : Azadeh Gholizadeh, Aha onye ahịa : azadeh graphic design studio.
Kalama Azadeh Gholizadeh Herbal Drink